Izimiso zethu Zokuziphatha - Quanzhou Omi Apparel Co., Ltd
Imikhuba Yethu Yokuziphatha
Kwa-OMI, sizibophezele emikhubeni emihle yokuhweba efanelekile ukuvimbela ukuxhashazwa kwabasebenzi noma izinsiza zemvelo ekwenziweni kwezingubo.
Sikholelwa ngokwethu ukuthi abasebenzi abajabulayo balingana nezingubo ezenziwe kangcono njengoba abasebenzi bekhuthazeka kakhulu ukwenza umsebenzi omuhle uma besebenza ngemikhuba emihle yokuqashwa futhi besendaweni ephephile efanelekile yokusebenza.
Amafektri Nezimo Zokusebenza
Amafekthri ethu awaqashi abasebenzi abangaphansi kweminyaka eyi-16 futhi ahlinzeka okungenani ngamaholo okuphila aphansi njengomholo oyisisekelo ngesikhathi esifanele.
Amafektri ethu awanazo izindlela zokusebenza ngenkani, okusho ukuthi akekho umuntu ophoqeleka ukuthi asebenze isikhathi esengeziwe ngokungahambisani nezifiso zakhe futhi uma esebenza isikhathi esengeziwe, kunesibonelelo esengeziwe sokukhokha isikhathi esengeziwe.
Izikhungo zokukhiqiza zihlonyiswe ngokufanelekile ngezindawo zokukhanyisa nezokuthuthwa kwendle kanti izimo zokusebenza nemishini kuphephile ngangokunokwenzeka ukuvimbela ukulimala okuhlobene nomsebenzi. Ezinye izibonelo ukuthi azikho izintambo / amasokhethi kagesi avele obala, kunesikhala esanele phakathi kwezindawo zokusebenza, imishini yokuphepha enjengezinsimbi zensimbi namagilavu ​​nobuso obutholakalayo ukuze kusetshenziswe.
Sisebenza futhi nezindwangu zokugaya eziyizindwangu I-GOTS iqinisekisiwe ne-OEKO-TEX 100 eqinisekisiwe okuhloliwe ukuthi kuphephile yini ukusetshenziswa komuntu nokusebenzisa izindlela zokukhiqiza eziphilayo.
Ifektri yethu nayo isidlulisile BSCI isitifiketi, Nikeza amakhasimende imikhiqizo ethembekile.